Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165665 times)
« Reply #380 on: February 20, 2013, 03:58:15 AM »
Quote from: vincent on December 20, 2012, 09:39:35 PM
Quote from: weya on October 28, 2012, 05:49:38 PM
ဟဲ နဲနဲတော့ဝင်ကျပ်လိုက်ဦးမယ် ...
အဲ့တော့ ကောင်လေးက စဉ်းစားတယ် ... လာတာ က ၃ ယောက်ဆိုတော့ ၅ ကျပ်သွာပေးရင် ပြန်ခွဲဖို့ ခက်လိမ့်မယ် ဆိုပီး ၂ကျပ် ဘတ်ထားလိုက်တယ် ... ၃ ကျပ်ပဲ ပြန်အမ်းလိုက်တာပေါ့
ပေးလိုက်တာက ၁ယောက် ၁၀နော်
ကျတာက ၂၅ ကျပ်
၀ိတ်တာ ၀ိုက်တာက ၂ ကျပ်
၉ x ၃ = ၂၇ ... ၀ိတ်တာ ၀ိုက်တာက ၂ ကျပ် ၂၇ + ၂ = ၂၉ ... ပေးလိုက်တုံးက ၃၀ ... ၁ ကျပ်
ကျွန်တော်ထင်တာ က ၂၅ ကို ၃နဲ့စား ရင် ၈.၃၃၃၃၃၃၃ ကျပ် နောက်က .၃၃၃၃၃၃၃ တွေကို ၃ နဲ့ ပြန် x ကြည်လိုက်ရင် ပျောက်တဲ့ ၁ကျပ်က အဲ့ဒီ ၂၅ကျပ်ထဲပါသွားပြီ ဟုတ်လားတော့မသိဘူး
နောက်နဲ့ ဂယ်တိုက်မှာလား။လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေး။ ဖြေမယ်။ ဘီယာဆာလို့ အဟီး။
easy.. it cost them $25 for the table and they got back $3 for $1 each. and the waiter took $2 for himself..so 25+3+2=30
haha.. am i right..
« Reply #381 on: March 12, 2013, 01:12:49 PM »
« Reply #382 on: March 28, 2013, 04:46:25 AM »
Quote from: zero0 on April 11, 2011, 11:56:24 AM
ဟီးဟီး... ဒါဆိုရင် ကြယ်သီးတို့.. စစ်သားတို့တော့စားတယ်တော့ .. Juz kiddinG
« Reply #383 on: June 17, 2013, 11:37:00 AM »
« Reply #384 on: June 17, 2013, 06:28:12 PM »
Quote from: zero0 on April 22, 2011, 10:49:45 AM
ထမိန်ချွတ်၊ အမွှေးနုတ်၊ မစိစား - ဘာကြီးလဲဗျ ...
နောက်ထပ် hints လေး ထပ်ဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်။
" နေရာ၊ ရာထူးကောင်းသော ၀န်ထမ်းကြီး/ငယ်တွေက အဲဒါ လေး နဲ့ ယတြာချေတက်ကြပါသည်။" ခင်တဲ့ SKS
« Reply #385 on: June 25, 2013, 12:08:24 PM »
13ထပ်တိုက်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် အလယ်ခန်းမှာရောက်နေတယ်လို့ တွေးလိုက်ပါ ...
၁၀ ထပ်ကနေမီးစလောင်ပြီး ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ထပ်တွေကို မီးကူးခဲ့တယ် ... သင်ရှိနေတဲ့ ၁၃ထပ်ကလည်း မီးစလောင်ပြီး မီးခိုးတွေက များလွန်းတော့ ဘာမှ မမြင်ရဘူး ... သင်ထွက်ပြေးဖိုကလည်း မလွယ်တော့ဘူး ... အသက်ဘေးက မလွတ်မှာကတော့ ၉၉.၉၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ် ...
ကဲ . ဒီအခြေအနေမှာ သင်ဘာလုပ်မလဲ ...
မှတ်ချက်။ သင့်အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး သင်ကျေနပ်နိုင်ပါစေ
« Reply #386 on: June 26, 2013, 09:51:25 PM »
Quote from: နိုးတူး on May 17, 2012, 02:10:35 PM
Quote from: chanthar on May 17, 2012, 01:30:00 AM
သစ်ပင်ဆိုတာ လူတွေကို အများကြီးအကျိုးပြုပါတယ်...
လူတွေကလဲ အဲသစ်ပင်တွေခုတ်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနေရဆဲပါ...
ကျွှန်းဆိုလဲ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ရှာပေးသလို..၀ါးဆိုလဲ တောသူတောင်သားတွေအဖို့ မရှိမဖြစ်ပါပဲ...
ဒါပေမဲ့ လူကို အကျိုးမပြုတဲ့ အပင် တမျိုးတော့ ရှိပါတယ်...အဲအပင် ခုတ်ပြီး လည်ရောင်းလဲ ၀ယ်မဲ့သူမရှိပါဘူး...
ကိုယ်တိုင်လဲ အသုံးပြုဖို့..(အ၀တ်တန်း..ထင်း..ပရိဘောဂ..ခေါင်းတင်အုံးဖို့) ရေရှည်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူး..
ငှက်ပျော်ပင်တောင်မှ မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်ချက်ဖို့ အသုံးဝင်ပါသေးတယ်...
မြက်ပင်တောင်မှာ နွားစားဖို့ အသုံးဝင်ပါဦးမယ်...ဂျပန်မြက်ဆို ဈေးတောင် ကြီးသေး..
အပင်ကို ခုတ်တယ်ဆိုထဲက သစ်ခွ..သဇင် ကဲ့သို့သော် အပင်သေးမျိုး...မဟုတ်ပါ..ပင်စည်လုံးပတ်ကို ဓားနဲ့ ခုတ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်...လက်ဖြင့်ချိုးလို့ ရတဲ့ အရွယ်အစားမဟုတ်ပါဘူး..
လွယ်ပါတယ်။ အဖြေက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် 20 လောက်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့အလုပ်ပါ။
« Reply #387 on: June 27, 2013, 07:53:21 AM »
Quote from: vincent on June 26, 2013, 09:51:25 PM
« Reply #388 on: July 08, 2013, 06:31:43 PM »
ဒါပေမယ့်..သတိထားရမှာ..လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်တစ်ခုစီ လဲရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ
« Reply #389 on: July 29, 2013, 01:48:34 AM »
Quote from: winner.wlo on July 08, 2013, 06:31:43 PM
သင်္ဘောပင် ပါ တဲ့ ဗျား ပြော ရ ရင် တော့သင်္ဘောသား ပေါ့ .. ပြောသာပြောရ စိတ်မချမ်းသာဘူး ကိုယ်တိုင် က သင်္ဘောသား ဖြစ် နေလို့ 